Israel oo duqaysay xarumo milatari oo Iran ku leedahay gudaha Suuriya. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Israel oo duqaysay xarumo milatari oo Iran ku leedahay gudaha Suuriya.
Israel oo duqaysay xarumo milatari oo Iran ku leedahay gudaha Suuriya.
Duqayn ay Israa’iil ka fulisay bartamaha Suuriya ayaa lagu dilay ugu yaraan hal askari oo Suuriya ah iyo saddex dagaalyahan oo Iiraan taageersan, sida uu sheegay kormeere dagaal oo fadhigiisu yahay UK.
Wakaalladda Wararka Syria ee SANA oo soo xigatay ilo Milliteri ayaa sheegtay in weerar ka dhacay meel u dhow magaalladda Palmyra ee Gobalka Homs lagu dilay Askari, laguna dhaawacay 3 kale.
“Qiyaastii 23:34 (20:34 GMT) cadowga Israa’iil ayaa weerar xagga cirka ah ku qaaday… aagga Palmyra oo bartilmaameedsaday xarun isgaarsiin iyo dhowr meelood oo ku dhow,” ilo -wareedka ayaa u sheegay SANA.
Kormeeraha Xuquuqda Aadanaha Siiriya, oo fadhigiisu yahay UK, ayaa sheegay in weerarka lagu bartilmaameedsaday dhowr meelood oo Iiraan leedahay, oo ay ku jiraan xuran isgaarsiinta, oo u dhow saldhigga cirka ee T4 ee bariga Palmyra.
Kormeerayaasha ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee Israel ay dul mareen saddex-xagalka xadka Ciraaq-Suuriya iyo Urdun markii ay weerarka fulinayeen.
Waxay ku warrantay in weerarka lagu dilay hal askari oo Suuriyaan ah iyo saddex dagaalyahan oo Iiraan taageersan, laakiin lama shaacin dhalashadooda.
Sida laga soo xigtay Observatory, dhowr gantaal oo kale oo Israa’iil ayaa waxaa ka hortagay waaxd difaaca cirka ee Suuriya.
Toddobo qof oo kale, oo ay ku jiraan saddex askari oo Suuriya ah, ayaa dhaawacmay.
Dhacdadan ayaa timid maalmo ka dib markii warbaahinta dowladda Suuriya ay sheegtay in difaaca cirka ee Suuriya ay ka hortageen weerar gantaal oo ay Israa’iil ku qaaday baadiyaha Homs, halkaas oo ay ku dhaawacday lix askari oo Suuriya ah isla markaana ay waxyeello xoog leh u geysatay saldhigyo ciidan.
Kormeerayaasha ayaa sheegtay in laba dagaalyahan oo ajnabi ah oo taageersan Iran lagu dilay weerarkaas.
SANA ayaa sheegtay in 6 askari ay sidoo kale ku dhaawacmeen dhacdadaasi.
Tan iyo markii uu qarxay dagaalkii sokeeye ee Suuriya sanadkii 2011, Israa’iil waxay si joogto ah duqeymo uga geysan jirtay gudaha Suuriya, inta badanna waxay ku qaadday ciidamada dowladda Suuriya, iyo sidoo kale ciidamada Xisbullah ee Iiraan iyo Lubnaan oo xulafo la ah taliska Dimishiq.
Ciidanka Israa’iil si dhif iyo naadir ah ayay u qirtaan weerarada shaqsi ahaaneed laakiin waxay marar badan ku celceliyeen inaysan u oggolaan doonin Suuriya in ay noqoto meel ay ku xoog badan yihiin cadowgeeda Iiraan.
Next articleSannad guuradii 4-aad oo maanta laga joogo Qarixii dhimashada badnaa ee Soobe